Ciidamada Badda oo maanta sameeyay dhoolatus – idalenews.com
Ciidamada Badda oo maanta sameeyay dhoolatus
Ciidamada Badda Soomaaliya ayaa maanta Xeebaha magaalooyinka Muqdisho iyo Marka ku soo bandhigay dhoolatus balaaran oo ay ugu diyaar garoobayaan aas aaska ciidamada Badda Soomaaliyeed oo ku beegan Horaanta bisha soo socota.
Dhoolatuskan ayaa waxaa sameynayay cutubyo ka tirsan ciidamada Badda Soomaaliya waxaana ka qeyb galay mas’uuliyiinta wasaaradda difaaca dalka, taliyaha ciidamada Badda Admiraal Faarax Maxamed Cumar “Farax Qare” isagoona salaan sharaf ka qatay ciidamadii maanta sameynayay dhoolatuska.
Taliyaha ciidamada badda Farax Qare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhoolatuskan ay ugu talagaleen in ay ku soo bandhigaan sida ay diyaar ugu yihiin in ay u qabsadaan munaasabad ay ku muujinayaan 51 guuradii ka soo wareegtay aas aaska ciidamada Badda.
Sidoo kale Abuukar oo ah madaxa siyasaadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hadal ka jeediyay goobta ayaa tilmaamay in dhoolatuska ay sameeyeen ciidamada Badda ay tahay mid si weyn looga qeyb galay.
Talabadaan dhoolatuska ah ay maanta sameyeen ciidanka Badda oo ay wehliyaan sarakiil iyo janaraalo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa kusoo gaafa wareegay inta u dhaxeysa xeebaha Xamar ilaa iyo Marko, waxeyna arintaan ay qeyb ka tahay u diyaar garoowga sanad guurada 51 ee ka soo wareegtay aas aaskii ciidanka badda.
Taliska ciidanka XDS oo muddo 5 maalin ah u qabtay dadka dagan xerada Damaanyo in ay uga guuraan